Mfe ịwụnye China 20FT Office ịkpakọba Container House N'ihi Sale
EGO NA-EGO Naanị ihe a na-emegharị emegharị emeela ụfọdụ ndozi n'ịdo ụlọ akpa. Enwere ike apịaji ya ka o wee chekwaa ime ụlọ mgbe eburu ya n'ime ihe mbufe. Yabụ, otu 40HQ nwere ike ibu karịa mpịachi containers karịa nkịtị containers (Ọ bụ size bụ 5800x2450x2500mm mgbe apịaji si). Oge ndụ ya tokwara ogologo karịa mbadamba mbadamba. Nke a na ụdị mpịachi akpa na-ejikarị na-ebi n'ụlọ n'ihi ya asọmpi price. Nha 2500X5800X255 ...
Ngwa ngwa agbakọ Prefab Building Construction Steel Structural Warehouse
1.Building System Customized Warehouse ma ọ bụrụ na ịnwe eserese na nkọwapụta teknụzụ, nabata zitere anyị n'oge ọ bụla. Ihe mgbaru ọsọ anyị abụghị naanị inye nnukwu mma ígwè Ọdịdị ụlọ, kamakwa ịnọgide na-enwe ahaziri na ọkachamara mmekọrịta ọ bụla ahịa. N'agbanyeghị otú nnukwu ma ọ bụ obere gị chọrọ anyị ga-eme ike anyị niile iji na-egbo gị ina. Otu nkwụsị ọrụ si imewe, rụpụta, anapụta nwụnye na mgbe-ọrụ. 1.We ike Nlụpụta nditịm dị ka gị d ...
Gable etiti ìhè metal ụlọ prefabricated ulo oru ígwè Ọdịdị nkwakọba
1.Building System ● Ntụkwasị obi kachasị elu nke ọrụ nchara. Ogologo oge na-eji oge ruo afọ 50. ● Ngwongwo ígwè bụ mmetụta, nkwụsi ike ma dị mma nke na-egbochi seismic nke ibu bụ ìhè. ● A na-eji ígwè arụ ọrụ maka ọkwa dị elu nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. ● Nchara ụlọ nwere ike ịgbakọta ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi, oge nchekwa na nchekwa ọrụ. A-Nnukwu ohere dị n'ime ime ụlọ ma ọ bụ nchara ígwè, ogologo nke prefab ígwè nwere ike iru 80meters. O nwere ike ịbụ ime ka ihe akara. ● Mara mma ...
Ọnụ ego dị ala ụlọ owuwu ihe eji emepụta nnukwu ihe eji emepụta ụlọ nkwakọba ihe abụọ
1.Installation Anyị ụdị ọhụrụ ígwè Ọdịdị bụ ihe adaba iji wụnye, 2,000 square mita nwere ike agwụ agwụ n'ime 1 izu site 5 ọrụ. 1) Isi ígwè okpokolo agba (Ọdịdị) na-niile jikọọ site elu-ike bolts, ọ dịghị mkpa na saịtị na ịgbado ọkụ. Ntinye ya yiri ihe owuwu ụlọ. (2) Kpamkpam 2 ụdị nke purlins ga-eji na ụlọ na mgbidi nke anyị Steel Structure. (enwere ma ọ dịkarịa ala ụdị purlins 4 ga-eji n'elu ụlọ na mgbidi rụọ ọrụ ndị ọzọ ...
Extended Foldable Prefab Container Homes mpịachi prefabricated ụlọ
1. oldlọ mpịachi akpa ụlọ naanị ụlọ ọrụ a na-arụzi ụlọ na 2010. Otu n’ime ndị ahịa anyị chọrọ ụfọdụ ogige ọrụ, ọ gwara anyị na ụgwọ ọrụ na mba ya dị oke elu, na ya enweghị ahụmịhe ịwụnye ụlọ. Ya mere, anyị mere ya ụlọ a. Enwere ike apịaji ya ma meghee ya ọtụtụ oge, ma nwee ike itinye ya na nkeji 10. Prefabricated mpịachi akpa ka nke ìhè ígwè Ọdịdị na Sanwichi ogwe f ...
New Style Prefab ịkpakọba akwadebere Container House Tiny House
1.Folding Container House EXCLUSIVE PATENT The mpịachi akpa ụlọ bụ ụda mkpuchi ihe, fireproof, waterproof, ájá na-àmà, windproof na shockproof na ndị ọzọ na àgwà. Na galvanized ígwè etiti bụ inogide na mgbochi corrosive, mgbidi na ụlọ bụ agba ígwè sandwich ogwe, ọ dị mma na mkpuchi, ọ ga-eji na desert, ahịhịa ala, snow-berg, seaside, ọ kwesịrị niile-weath ...